Xeerbeegtida si ay u dhagaystaan ​​kiiska xadgudubka galmada ee kaaliyaha diyaaradda American Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Xeerbeegtida si ay u dhagaystaan ​​kiiska xadgudubka galmada ee kaaliyaha diyaaradda American Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Xeerbeegtida ayaa dhageysan doona kiiska faraxumeynta ee duuliyaha diyaaradda American Airlines .
American Airlines waxay ku guuldareysatay inay isku daydo inay joojiso sheegashada faraxumaynta kaaliyaha diyaaradda.
Xukunka xaakimka Kimberly Fitzpatrick ayaa diiday dhammaan qaybaha mooshin xukun kooban oo uu gudbiyay Mareykanka kaasoo doonayay in laga fogaado in xeerbeegtida loo ogolaado in ay dhageystaan ​​kiiska.
Kiiskan ayaa lagu maxkamadeeyay 342nd Maxkamadda Degmadda Garsoorka Janaayo 24, 2022.
Dacwadda Kimberly Goesling waxaa ka mid ah sheegashada xadgudubka galmada, shirqoolka iyo aargoosiga.
Mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda American Airlines oo sheegtay in uu faraxumeeyay nin caan ah oo cunto kariye ah oo ay shirkaddu kiraysay ayaa fursad u heli doonta in ay sheekadeeda u sheegto xeerbeegtida, ka dib go'aan muhiim ah oo uu soo saaray garsooraha maxkamadda degmada Tarrant.
Xukunka, oo uu sameeyay garsoore Kimberly Fitzpatrick, ayaa diiday dhammaan qaybaha soo jeedinta xukunka kooban ee uu gudbiyay American Airlines taas oo rabta in ay ka fogaato in loo ogolaado xeerbeegtida in ay dhagaystaan ​​dacwada. Kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu maxkamadeeyo 342nd Maxkamadda degmada Garsoorka Janaayo 24.
"Waxaan aaminsannahay mar walba in marka xeerbeegtida Fort Worth ay maqlaan kiiskan oo ay maqlaan waxa ku dhacay macmiilkaygii - iyo sida Maraykanku u diiday iyada oo ka dibna uga aarguday - way argagaxi doonaan," ayuu yidhi qareen Robert Miller oo ka tirsan Miller Bryant LLP. Dallas, oo wakiil ka ah dacwoodaha. "Waxa kaliya ee aan waligeen rabnay waa fursad aan sheekadeena ugu sheegno xeerbeegti, hadda waxaan haysanaa fursadaas."
Dacwoodaha kiiska, Kimberly Goesling ee Fort Worth, ayaa markii ugu horreysay si fagaare ah uga sheekeysay sheekada ku saabsan waxa ku dhacay - iyo doorka Mareykanka ee arrintan - muuqaal la duubay 2021 Facebook iyo Instagram oo gaaray in ka badan 25,000 oo qof.
Ms. Goesling, oo ah ku dhawaad ​​30 sano oo kaaliyaha duulimaadka American Airlines, waxay leedahay diiwaan shaqo taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu fiican shirkadda. Waxay ahayd hogaamiye kooxeed diyaaradeed waxayna ka shaqaynaysay qorista iyo kooxaha tababarka ee shirkada. In ka badan hal mar, waxay heshay dib u eegis dhalaalaya oo ku saabsan waxqabadka shaqada, inta badan waxay keentay hawlo gaar ah.
Bishii Janaayo 2018, hal safar oo noocaas ah ayaa u qaaday Jarmalka, halkaas oo ay weheliyaan shaqaale kale oo American Airlines ah, waxay ka caawisay horumarinta liiska caalamiga ah ee gaarka ah ee rakaabka heerka koowaad iyo ganacsiga.
Sidoo kale safarka waxa ku jiray cunto kariye caan ah oo Maraykanku kiraystay iyada oo aan la hubin taariikhdiisa oo uu sii waday in uu shaqaaleeyo xitaa ka dib markii uu ogaaday eedeymaha hore ee isaga ka dhanka ah xadgudubka khamriga iyo dhaqan galmo aan habboonayn, sida ku cad dacwadda. Habeenkii u dambeeyay ee ay kooxdu deggenayd, cunto kariyaha ayaa xoog ku galay qolka huteelka Ms. Goesling oo uu faraxumeeyey. Baaritaanka Mareykanka uu sameeyay ayaa markii dambe muujiyay inuu qirtay weerarka.
Markii ay ka warbixisay weerarka shirkadda, maareeyayaashu waxay ballan-qaadeen inay Ms. Goesling siin doonaan daawaynta oo ay u oggolaadaan waqtigeeda inay ka baxdo shaqada, haddii loo baahdo. Midna ma ay yeelin, taa beddelkeeda waxay ka saareen booskeedii ay jeclayd ee kooxda qorista ee diyaaradda.
Dacwadeeda waxaa ka mid ah sheegashada kufsiga, shirqoolka iyo aargoosiga. Kiisku waa Kimberly Goesling v. American Airlines et al., Sababta No. 342-314565-20 ee Maxkamadda Degmada 342aad ee Garsoorka ee Degmada Tarrant.